Soo ogow waxa lagu arko Wales, United Kingdom | Bezzia
Maxaa lagu arkaa Wales, United Kingdom
Susana Garcia | 24/03/2021 10:00 | nololeedka, safarka
Wales waxay ka tirsan tahay Boqortooyada Ingiriiska waana mid kamid ah qaybaha ugu quruxda badan ee aan arki karno. Safar ku qaadashada aaggan koonfureed waa wax cajiib ah, tan iyo markii aan helno muuqaal qurxoon iyo tuulooyin qurux badan. Waxaa loo yaqaanaa inay tahay dhul leh qalcado badan, maadaama ay ahayd meel aad loo ilaaliyo, laakiin sidoo kale leh magaalooyin yar yar oo soo jiidasho leh iyo muuqaal qurxoon oo neefta naga qaadi doona.
Dhab ahaantii waa u qalantaa tixgaliso safarka aagga Wales, maadaama aan jacayl la yeelan doonno aaggan. Mid ka mid ah ummadaha ugu yar Boqortooyada Ingiriiska laakiin taasi ma leh wax ay ka masayrto kuwa kale. Waxaan booqan doonnaa meelaha ugu waaweyn ee lagu booqdo Wales.
1 Cardiff, caasimada
2 Swansea, oo ah magaaladiisii ​​labaad
3 Conwy, waa magaalo soo jiidasho leh
4 Beerta Qaranka ee Snowdonia
5 Llandudno, ku raaxee qaabka Victoria
Cardiff waa caasimada Wales sidaas darteedna waa in la arkaa. Waxay u taagan tahay qalcaddeeda tan iyo wakhtigii xukunka Roomaanka in kasta oo ay soo martay dayactir badan iyo kordhinta taariikhda oo dhan. Lama seegi karo waa Tower-ka saacadda iyo gidaarka xayawaanka. Marka xigta waxaan booqan karnaa xaafadda Castillo, oo ah meesha ugu ganacsiga badan uguna firfircoon. Waxa kale oo mudan in la arko waa Bute Park oo qurux badan, oo ka mid ah jardiinooyinka magaalada ugu waaweyn ee Boqortooyada Ingiriiska, oo ku teedsan wabiga Taff. Booqo qolalka quruxda badan ee Royal Arcade, oo ah meel laga helo xusuus iyo waxyaabo qadiim ah. Waxay ku sii socotaa booqashada Suuqa Dhexe si ay u aragto alaabada caadiga ah iyo Matxafkeeda Taariikhda.
Swansea, oo ah magaaladiisii ​​labaad
Tani waa magaalada labaad ee ugu weyn uguna muhiimsan Wales, taasoo ka dhigeysa meel kale oo la booqdo. Xarunteeda waxaa dib loo dhisay Dagaalkii Labaad ee Adduunka kadib duqeyn. Waad arki kartaa Fagaaraha Castle waxaadna booqan kartaa Oxford Street, goobtiisa ganacsi. Waxay sidoo kale muujineysaa suuqgeeda ballaaran, oo leh waxyaabaha ugu wanaagsan ee gastronomic ee Wales. Meeshan waa inaad ka sahamisaa gacanka quruxda badan oo aad dhaaftaa Mumbles Lighthouse, laydhkeeda caanka ah.
Conwy, waa magaalo soo jiidasho leh
Gudaha Wales waxaan ku leenahay magaalooyin quruxsan oo yar, sida Conwy ee Waqooyiga Wales. Magaalo deyr leh oo lagu dhawaaqay inay tahay Goob Dhaxal Adduun. Waxay u taagan tahay dhismaheeda qarnigii XNUMXaad taasi waxay shaki la'aan soo jiidan doontaa indhaheena oo wali ilaalinaysa qeyb kamid ah darbigeeda. Gudaha villa waxaad ku arki kartaa guriga Plas Mawr oo leh qaab dhismeed qurux badan oo Elzabethan ah. Waxaan sidoo kale booqan karnaa guriga ugu quruxda badan Great Britain iyo aagga dekedda, oo aad u qurux badan.
Beerta Qaranka ee Snowdonia
Beertan qaran ee quruxda badan ee ku taal Northwest Wales waxaa ka buuxa buuro, dooxooyin, harooyin iyo biyo-dhacyo. Meel aan la yaabin oo keliya haddii aan dhex marno, laakiin sidoo kale waxay janno u tahay kuwa doonaya inay u baxaan socod dhex-dhexaad ah dabeecadda. Beertan waxaa ku yaal Mount Snowdon, oo ah meesha ugu sareysa England, iyo sidoo kale meelaha kale ee ugu hooseeya ee ku habboon bilowga buurta. Sida laga soo xigtay halyeeyga, buurta dusheeda waxaa ku yaal ogre Ritha Gawr, oo uu toogtay King Arthur.
Llandudno, ku raaxee qaabka Victoria
Tani waa mid kale oo ka mid ah magaalooyinka soo jiidashada leh ee Waqooyiga Wales, oo ah meel sidoo kale u ah dalxiis weyn Boqortooyada Ingiriiska. Waxaa jira taraam weyn oo kor u kacaysa xagga sare ee magaalada. Ahaanshaha goob dalxiis noocan oo kale ah waxaan ognahay inaan ka heli doonno nooc kasta oo adeegyo ah, laga bilaabo dukaamada ilaa maqaayadaha, hudheelada iyo makhaayadaha. Loogu talagalay socodkeeda quruxda badan, laakiin sidoo kale dhismooyinka qaab-dhismeedka Fiktooriya. Sidoo kale, sida muuqata waxay ahayd halkan Lewis Carroll oo la kulmay waxyar reer London ah oo ku dhiirrigeliyay inuu abuuro 'Alice in Wonderland'.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » nololeedka » Maxaa lagu arkaa Wales, United Kingdom
Kariimka qorraxda ka hor ama ka dib marka la qoyo
Waa maxay cudurka Houdini?